Uhlu lwe-imeyili lwaseChina | Ikheli Le-imeyili LaseChina | Idathabhegi Yokuposa Yamuva
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili ye-China
China Uhlu lwe-imeyili
Uhlu Lwama-imeyili lwakamuva lwaseChina Ithimba lomakhi we-imeyili lakhiwe i-database evela eChina. Sine-imeyili Yebhizinisi Engama-600k kanye Nesizinda Sokuxhumana sefoni esivela eChina. Ithimba lethu lichithe izinyanga ezingaphezu kwezingu-2 lakha le database. Yonke imininingwane ifake lonke irekhodi olidingayo ekwakheni imikhankaso yakho yokuthengisa nge-imeyili yebhizinisi. Ikheli lethu le-imeyili lokuxhumana laseChina linezwe elihlukile laseChina nedolobha elizolungela imakethe yakho eqondisiwe eChina.
Idatabase lakamuva lenze izigidi zohlu lwama-imeyili asanda kubuyekezwa e-China, i-database yabathengi neyebhizinisi ye-2019. Le ngenye yezinkampani zokuthengisa ezisebenza kahle online ezisanda kuvuselelwa. Njengoba sikhonze amazwe aphezulu njenge-UK, i-USA, i-CANADA, i-GERMANY, i-AUSTRALIA kumele senze i-database yethu ye-imeyili icace, ihlanzekile futhi iqonde. Ungenza isibalo esihle ezweni eliyinselele le-inthanethi nomngane we-database yakamuva.
Ikheli Le-imeyili Lokuxhumana Nebhizinisi laseChina
China B2B Ikheli le-imeyili
Uhlu lwe-imeyili yebhizinisi laseChina lufake yonke imininingwane yokuxhumana yebhizinisi laseChina. Uzofinyelela kosomabhizinisi baseChina ngale database ye-imeyili yebhizinisi laseChina. Yonke imininingwane yokuxhumana yebhizinisi laseChina esebenzayo. Futhi uma ufuna ukwakha i-database yangokwezifiso ye-China b2b sicela uxhumane nathi. Ngaphezu kwakho konke imininingwane ye-imeyili yebhizinisi laseChina.
Thenga Izinhlu Ze-imeyili Zamanje ze-China B2B
Inani lamarekhodi: 243,000
Yenza Isampula Lamahhala
Uhlu Lwama-imeyili Abathengi baseChina
Inani lamarekhodi: Isigidi se-5
Ungazihluphi ngokuxhumana nabakwa-generics (njenge [i-imeyili ivikelwe]). Ngohlu lwethu, ungathumela i-imeyili kubantu bangempela.
China Email Uhlu Umbuzo & Impendulo